Nrụrụ aka na ọnwụ - ihe si na ya pụta
Esoterics Atụmatụ na Rites
Imebi ọnwụ abụghị ihe nhụjuanya, ọ dị mwute, ọbụbụ ọnụ nke ezitere maka mkparị, ndakpọ olileanya, na mmegwara. Maka ozi, ọ dịghị otu ihe dị n'akwụkwọ nke ndụ nke ga-egosi na ọ bụ ọnwụ. Onye obula, ihe obula o bu, kwesiri ntaramahuhu maka omume ya na ochichi ya, ma obugh otua ka ya onwe ya - madu. Ruo ogologo oge, enweghi ndi nmehie n'uwa, madu nile nwere obe nke ya. Ime ihe kwesịrị ma ọ bụ kwesịghị ime onye ọzọ bụ azụmahịa mmehie na ntaramahụhụ maka mmebi ọnwụ bụ nnọọ njọ, na-adịgide adịgide ruo ọtụtụ narị afọ na ọgbọ. Ikekwe, nke a bụ nanị ụdị na-eme ka ndụ gị dịrịgide na ụmụ. Ha ga-abụ maka ọrụ nzuzu gị - mmehie dị oké njọ.
Kedu ka ị si mara ma ọ bụrụ na e mebiri gị?
Ghọta ihe mgbaàmà nke ịmegbu mmadụ ọnwụ maka ihe ndị metụtara ahụ ike.
Nke mbụ, ọchịchọ nke ịdị ndụ ma nwee obi ụtọ ndụ ga-agwụ. Nrọ dị arọ, ịjụ iri nri, mgbakasị dị na ụkwụ, ịdị nro, nrụgide siri ike ma dị njọ.
N'ezie, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke ọrịa ọkụ nkịtị, ọnụ ọgụgụ na ọrịa hemoglobin ma ọ bụ ọrịa obi, nke ga-enyere aka gwọọ ọgwụ. Ma ọ bụrụ na nrọ na ọhụụ na-ebuwanye ibu, na mgbe otu nhụsianya, na usoro ahụ ike, onye nke ọzọ na-eso n'ụzọ siri ike, mgbe ahụ, ọ bara uru ịtụgharị uche: ọ bụ na nsogbu adịghị gị maka gị na ezinụlọ gị?
Esi ewepu mmebi ọnwụ?
Ha na-ewepụ ọnyà nke ndị dibịa afa ma ọ bụ ndị amoosu obodo. Mana ọ bụghị onye ọ bụla na - ewere azụmahịa a - ọ dị ize ndụ maka ahụ ike. Mmetụta dị njọ nke ọnwụ, ihe si na ya pụta metụtara ezinụlọ dum, na-ewepụ site na ịrịọ arịrịọ.
A maara onye mere nke a, na-abụkarị otu ụbọchị. Ya, otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, pụtara n'ihu ya iji were, nye, jụọ, wdg. Dị ka omume ya si dị, o doro anya na mgbanwe adịghị aga n'ihu maka onye ahụ.
Ahuhu, n'ọnọdụ ọ bụla, ga-enweta ọchịchọ nke imebi ihe, n'ihi na mmebi nke ọnwu mmadụ enweghị ikike ịnọ na iwu ụmụ mmadụ. Imebi iwu ahụ, n'ọnọdụ ọ bụla, gụnyere ahụhụ. Na nke a, ọ gaghị ekwe omume ịhapụ ya na ụkpụrụ njedebe maka ya adịghị edepụtara ya.
Olee otu esi echebe onwe gị pụọ na spoilage?
Kedu ka esi esi n'ebe dị anya wepụ onye ọhụụ?
Ezinụlọ na-akatọ oke nwoke
Nzube ịchọta ọrụ
Esi kpochapụ kpara bụ nkwekọrịta
Atụmatụ nke Wangi
Olee nkwekọrịta ndị a na-agụ n'ọnwa ọhụụ?
Rites maka Afọ Ọhụrụ iji nweta ego
Nzube megide isi ọwụwa
Ihe ịrịba ama nke spoilage na anya ọjọọ na nwoke
Ememe Simoron maka mmezu nke ọchịchọ
Kedu ihe ụmụ nwanyị na-eme na ụmụ nwoke?
Ngwọrọgwu radish na njikwa ha
A na-acha ntutu isi nke na-akọwa ntutu isi
Jiri akwa aka gị kpoo akwa akwa
Ejiji eji egosi - oge oyi-oyi 2015-2016
Ọdịdị nke ịmụ nwa
Nri "Esi asaa" - menu maka ụbọchị ọ bụla
Kedu ụdị akpụkpọ ụkwụ bụ ejiji n'oge oyi a?
Nkwa maka ejima
Emma Watson gbaghaara ya na enyi nwoke William Knight
Karịa iji na-eme ihe na-adịghị mma na nkịta?
Ego ole carbohydrates dị osikapa?
Badger abụba - ọgwụ ọgwụ na contraindications
Conjunctivitis bacterial na ụmụaka - ọgwụgwọ
Usoro ụbọchị na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Kedu otu ị ga esi ahọrọ blanketị nke achara?
Ụlọ nsọ St. Petersburg
Cod na oven - ihe kacha atọ ụtọ na nke mbụ ntụziaka maka azụ azu
Sophora Japanese - ngwa
Ezigbo ụtọ nke celery
Mmiri na-apụta - nhazi